7 Antony XNUMX Ny Votoatinao Tsy Mahomby Amin'ny Millennial | Martech Zone
Talata, Aprily 7, 2015 Talata, Aprily 7, 2015 Douglas Karr
Indraindray aho rehefa mamaky ny zavatra hita manokana momba ny vondrona demografika na jeografika dia misento kely aho. Tsy milaza aho hoe ity tatitra ity izay NewsCred dia tsy zava-dehibe ho an'ny mpivarotra hitadidy ao an-tsaina, fa mino aho fa matetika isika dia mirona amin'ny ankapobeny amin'ny angon-drakitra ary indraindray tonga amin'ny fehin-kevitra tsy marina.
Manontany olona matetika aho, aleonao manatratra olona 10,000 manana tahan'ny valiny 1% sa olona 500 manana taha 25%? Raha sahirana amin'ny matematika ianao - dia hamaly 25 ny valinteny farany. Noho izany, indraindray tsy mandeha any amin'ny salan'isa… indraindray ianao dia mila miditra lalindalina kokoa amin'ny toerana misy ny niches.
Raha ny marina, momba ireo olona an'arivony taona, dia mety hiady hevitra aza aho fa hahatratra izany Bebe kokoa mety tsy hamokatra. Ny angona avy amin'ity fanadihadiana ity dia mampiseho fa tsy maniry ny hamidy izy ireo… koa maninona no avoakanao ny fahatratraranao ny fivarotana azy ireo amin'ireny haitao sy paikady sosialy ireny? Mbola azoko atao ny manolotra ny media sosialy ho mpanelanelana amin'ny media, saingy ny tetikady dia tsy hitovy tanteraka amin'ny fizarana tadiaviko hifaneraserana amiko.
Fa maninona ny marika no miahy ny amin'ny taonarivo? Amin'ny taona 2020, ny millennial dia hitentina mihoatra ny $ 1.4 trillion amin'ny herin'ny fandaniana. Ho an'ny marika, midika izany fa raha tsy mahatratra millennial ianao dia tsy maharaka ny ho avy. Mampandeha ny fifandraisana amin'ny marika ny atiny, fa raha tsy mahomby amin'ny fampifandraisana ny mpihaino kendrenao ny atiny, inona no antony? 62% amin'ireo olona an'arivony taona no mahatsapa fa ny atiny an-tserasera dia mahatonga azy ireo hahatsapa ho mifandray bebe kokoa sy tsy mivadika amin'ny marika iray, saingy 32% ihany no mahita fa manampy ny fifandraisana amin'ny marika ankehitriny.
NewsCred dia manome izao torohevitra manaraka izao mba hamerenako ireo olona an'arivony taona:
Manamboara atiny manokana ho an'ny tsirairay tombontsoa ara-kolotsaina.
Hamarino tsara fa misy atiny mahasoa na mahasoa manoloana ny famahana ny olana andavanandron'ny taonarivo.
Aza atao varotra-y na tena fampahafantarana.
Tazomy izany fohy.
Tanjona ny ho mampisaintsaina ary manan-tsaina.
Aza mitrosa virosy na fanekena ara-tsosialy irery.
antoka personalization amin'ny isa vidiny, toerana, hazakazaka sns.
Mampiasà endrika izay mora ampiasaina mandevona ary mizara.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fampiasana atiny hivarotra amina taonarivo maro, ao anatin'izany ny fandalinana tranga efatra momba ny marika mety tsara, ampidino Torolàlana momba ny Arivo Taona malalaka an'ny NewsCred amin'izao andro izao!
Tags: infographic atinyContent MarketingSary torohaymillennialssary an'arivony taonanewscred